Edere site Tranquillus | Feb 10, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Njikọ ezi uche dị na ya maka ịde ederede ọkachamara
Eleghị anya ị na-ede ọtụtụ ozi ịntanetị kwa ụbọchị. Ruo ugbu a, maka gị, ide ihe na-abụkarị mkpoputa, ụtọ asụsụ, njikọ. Ọ bụrụgodị na anyị na-amụta ya kwa ụbọchị. Nke a abụghị ebe ịchọrọ ka itinye uche gị na mbọ gị ugbu a. Mgbe ị na-akwado a email, akụkọ ma ọ bụ karịa n'ozuzu ụdị ọ bụla ederede. Ị nwere echiche na ọ dị ihe adịghị mma. Ihe nta a na-efu efu nke anyị na-ahụ na akwụkwọ gọọmentị, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ. Usoro okwu, usoro okwu, ojiji okwu nke bụ akara nke ndị maara nka ederede. Malite imezigharị ederede gị site na iji njikọ ndị nwere ezi uche karịa ka amaara ama.
Njikọ ezi uche dị na ya maka gịnị?
Nke a bụ ihe kpatara ya, Otú ọ dị, ọ dị iche, n'ụdị ……. Njikọ ndị ezi uche dị na ya bụ mkpụrụ okwu ekwesịrị iji hazie ederede. Tumadi iji mesie ezi uche njikọ dị n’etiti ihe dị iche iche ederede gị, nkebiokwu. Kedu ihe na - eduga na nke a na ụdị nsonaazụ a. Kedu ihe omume ga - eme ka ọ kwe omume iru ebumnuche ahụ. Onye ọ bụla gụrụ gị ga-aghọta okwu gị n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Ogo nke asusu iji
N'agbanyeghị nke ahụ, echiche na ịsụpe ederede gị enweghị ike impe. O kwere omume na thehazi ugboro ugboro nke yiri okwu. O sina dị, na-enye ya a ike ike anya. Ikwesiri igughari ederede gi ka o dochie ihe omuma ma site na: ka osi di, n'aka nke ozo, wdg. Ihe eji oka eme ihe abughi mmebi n'onwe ya. N'agbanyeghị ihe niile, iji njikọta ndị ọzọ na-akwado ndekọ. Ozugbo tinyekwuo nụcha, ọkachamara na aka gị na ederede gị. Di iche iche nke okwu gi tinyere okwu ndi edere na-aghapu n'enweghi mmughari. Anyị ga-akwalite ezi nnyefe nke ozi ịchọrọ ịgbasa.
Ndepụta ezi uche njikọta ka mma anọgidesi gị ederede
Nke a bụ ndepụta nke njikọta iji na ozi ịntanetị gị, akụkọ na ederede ndị ọzọ. Site n'iji nlezianya jiri ha mee ihe, ị ga-eme ka ọgụgụ ọgụgụ na nghọta gị nke ederede gị dị mfe. O doro anya na nnukwu echiche, nke onye ọ bụla ga-aghọta, ga-echefu ndị isi gị ngwa ngwa.
Nye nke ahụ
Ka e were ya
Mgbe nke ahụ mechara
Adịghị ama ama
Ọ dị mma ikwu nke ahụ
Nke a bụ ihe kpatara ya.
Ọ bụ ya mere
Nke ahụ bụ ikwu
Nke a gụnyere
Dị ka a ga - asị
Ọ bụrụ otú ahụ
Na imewe a
Site na echiche a
N'otu ụzọ ahụ
Na anya mbụ
Ka ọ were.
Na nke a
N'ụzọ dị iche na
Ke akpa itie
Site na isoro echiche a
Tinyere ndị ọzọ
GỤỌ Jiri CCI nke ọma na ozi-e
Site n'iji atụnyere ihe
Site na mmegide
Ma ọ bụrụ na
Ọ gwụla ma
Ka ọ were
Ọ bụrụ na ọ bụghị
Mma gị na ịde ịke: ezi uche njikọta July 25th, 2021Tranquillus
gara agaIhe akaebe nke oge: onye ọrụ ekwesịghị igosi nkwụsị ọ bụla
-esonụBụrụ onye njikwa obodo ma nyekwa nkwado gị maka ọrụ gị